अवसरवादीलाई कुनै ठाउँ छैन
लामो समयदेखिको अस्थीरताका कारण नेपालमा विकास र समृद्धिको थालनी हुन सकेन । लाखौं युवाहरु विदेशिन बाध्य भएका छन । राजनीतिक खिचातानीका कारण विधिको शासन कायम हुन सकेको छैन । लामो बलिदानबाट प्राप्त भएका राजनीतिक उपलव्धीलाई पनि संस्थागत गर्न निक्कै अप्ठ्यारो अवस्था आयो । सबै राजनीतिक दलको सहकार्यमा संविधान जारी भएपनि त्यसलाई संस्थागत गर्न एकपछि अर्को अवरोधकोसामना गर्नु परेको छ । यो बीचमा सरकार परिवर्तनका अनेक खेलले मुलुकमा नागरिकले चाहे जस्तो बिकास र समृद्धिले ढोका खोल्न सकेन । हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण नेपालमा छिमेकीहरुले खेल्ने काम गरे ।
यी सबै कुराको महसुस गरेर हामीले मुलुकमा दुईवटा पार्टीको परिकल्पना गरेका छौं । अहिले नेकपा एमाले र हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा बामपन्थी गठबन्धन बनेको छ । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन बन्ने प्रकृयामा छ । यसले मुलुकलाई दुई पार्टी सिस्टममा लैजान्छ । दुई मध्य एकले बहुमत ल्याएको अवस्थामा कम्तिमा ५ वर्षसम्म स्थीर सरकार बन्न सक्छ । हरेक वर्षमा प्रधानमन्त्री फेरिने खालको सिस्टमलाई केहीहदसम्म भएपनि हामीले रोक्न सक्छौं । अहिलेको गठबन्धन हामी नेताको स्वार्थ भन्दा पनि देश र नागरिकको स्वार्थका लागिनै बनाइएको हो । जसका लागि हामीले धेरै लामो समयसम्म मेहनत गर्नु पर्यो ।
गठबन्धनहरु भत्काउने र देशलाई फेरि पनि अस्थीर बनाउने तर्फ केही व्यक्तिहरु लागि परेका छन । कहिले कता गएका छन कहिले कता गएर बिरोधमा लागेका छन । यस्ता चरित्रका व्यक्तिहरु पनि सक्रिय छन । कसैको चरित्र हत्या गर्नु राम्रो कुरा हुन सक्दैन । तर आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि उत्तर र दक्षिणसम्मको एकल यात्रा गर्नेहरुका कारण मुलुक समस्यामा परेको छ । त्यस्तै व्यक्ति तथा दलका कारण नेपालमा सामाजिक आर्थिक बिकासले गति लिन सकेको छैन ।
बिकास भनेको व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर कुनै एउटा गाउँ टोल र क्षेत्रको मात्रै गर्ने होईन, समग्र देशको र जिल्लाको परिवर्तन हुनेगरी गर्नु पर्छ । बिकास हुन स्थायी सरकार चाहिन्छ अब पुसमा बामपन्थीहरुको स्थायी सरकार बन्छ, त्यसपछि हामी बिकासको लहर ल्याएर गाउँ गाउँसम्म पुग्छौं । विभिन्न कामको खोजीमा विदेशमा रहेका ३० लाख युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृंजना गर्दै बिस्तारै स्वदेशमा ल्याउनु पर्छ । हामीले युवालाई रोजगारी दिनेगरी योजना बनाएका छौं । बामपन्थीहरुले राजनीतिक अधिकारका लागि अग्रभूमिका निर्वाह गरेका थियौं अब बिकासको नेतृत्व पनि हामीलेनै गछौं । विचार बिहिन, एकल भौतारिएर बिकास हुँदैन ।
व्यक्तिगत टिकाटिप्पणी गर्नु आवश्यक छैन । गोरखा दुइको चुनाव देशैभर र विदेशमा समेत चर्चामा छ । अहिलेको चुनावमा दुईवटा लाईनको संघर्ष भैरहेको छ । हाम्रो नेतृत्वमा स्वाधिनताका पक्षधर मैदानमा छौं । अर्को तर्फ बेलाबेलामा निहित स्वार्थमा विदेशीको सामु शिर झुकाउने काम गर्नेहरु पनि चुनावी मैदानमा छन । माओवादीमा हुँदा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर नयाँ शक्ति अभियान सञ्चालन गर्दा, त्यहाँ पनि नसकेर संघीय समाजवादी फोरमसंग पार्टी एकता गरौं भन्दा फोरमले अस्थिर बिचार भएकासंग एकता गर्दैनौं भनेर पछाडी हटेपछि उसैको चुनाव चिन्ह मसाल लिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा सामेल हुँदा, एकीकृत नेकपा बनाउँदा मलाई पनि समावेश गर्नु पर्यो भन्दा, चार दिनमै निस्केर जाँदा या त्यसको चार दिनपछि काँग्रेससंग पुग्दा कतिबेलाको बिचारलाई बिचारको नेतृत्व भन्ने ? अवसरवादीलाई राजनीतिमा हावी गराउनु हुँदैन ।
आफू देशकै कार्यकारी प्रमुख नभएसम्म पार्टीनै ठूलो भन्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपनि पार्टीलाई रातो स्टीकर लगाएको घर भन्नेलाई के भन्ने ? अस्थीरता, अराजक, चञ्चलेलाई चुनावमा जिताउनु हुँदैन । अहिले गोरखामा चुनावमा मत माग्दा म माओवादी हूँ भन्दै भोट मागिरहेको कुरा पनि सुनिएको छ । बामपन्थी होइन भनेर कस्ले घोषणा गरेको ? किन गएको विदेशीको प्रभावमा परेर ? त्यसैले यस्ता खाले अवसरवादी चरित्रका व्यक्तिलाई नागरिकले चिन्नुपर्छ ।
काँग्रेसले एक ठाउँमा समर्थन गरेका व्यक्तिले सरकार बनाउन सक्दैन । राजनीतिमा मौका परस्त, अवसरवादी र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई सुदृढ पनि गर्दैन । मौकावाद, अवसरवाद र व्यक्तिवाद ग्रसित नेताले नागरिक भेडाबाख्रा ठान्ने मान्छेले लोकतन्त्रको रक्षा गदैनन् । मैले राजनीति फोहोर भयो भनेर सफा गर्नु पर्छ भनेर लागेको छु । अहिले विभिन्न आरोप लगाइएको छ यो नितान्त गलत गरिएको छ ।
(नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा गोरखा क्षेत्र नं २ का उम्मेद्वार नारायणकाजी श्रेष्ठसगको कुराकानीमा आधारित )